Gabadh reer Nigeria ah oo ku guuleysatey tartankii quruxda aduunka islaamka - BBC Somali
Gabadh reer Nigeria ah oo ku guuleysatey tartankii quruxda aduunka islaamka
Obabiyi Aishah Ajibola oo u dhalatay dalka Nigeria ayaa ku guuleysatay tartankii quruxda gabdhaha muslimka ah ee sannadkan oo lagu qabtay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia.
Image caption Obabiyi oo ku guuleysatay quruxda muslimka
Markii lagu dhawaaqay gababadii iyo go'aankii tartanka ee ay maqashay magaceedii, Obabiyi waxay la gariirtay farxad iyo naxdin labadaba, waxayna bilawday inay ilmayso, isla markaasina akhrido aayado Quraan ah.
"Weligey kuma riyoon in aan helayo tartankan"; ayay tidhi Obabiyi, "waxanse u imid oo aan uga qayb galay in aan wax ka barto farshaxanka islaamka, iyo in aan dunida tuso quruxda qofka muslimka ah".
Tartankani waxa aakhirkii isku soo hadhay ilaa 20 gabdhood oo ahaa xulkii ugu danbeeyey, lagana soo dhex xulay ilaa 500 oo danaynayey, waxana la eegayey dhaqanka diinta islaamka ee xagga quruxda, naxariista, kartida, iyo kaalinta haweeneyda muslimka ah. Dalalka ay ka kala yimaddeen waxa ka mid aha Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria iyo Brunei
Obabiyi oo da'deeda ay tahay 21 jir ah waxay ku dhalatay magaalada Lagos ee dalka Nigeria, waxayna jaamicadda magaaladaas ku barataa culuunta qorshaynta magaalooyinka iyo qorshayaasha horumarinta gobollada.
Tartankan waxa soo abaabushay haweeney la yidhaa Eka Ashanti oo hore looga eryey shaqo ay ka haysay telifishan, sababta oo ah inay diidey inay madaxa bannayso oo ay ka bixiso xijaabka ay xidhato marka ay warka ka jeedinayso telefishanka.
Indonesia waa dalka muslimka ugu badani uu ku dhaqan yahay adduunka. Tartanka quruxda adduunka oo isna lagu qabanayo isla dalka Indonesia bishan 28-da, waxa haatan loo wareejiyey magaalada Bali oo dadka Hinduugu u badan yahay ka dib markii cabashooyin iyo mucaaradad weyni ay kaga timid dadweynaha muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalo-madaxda Jakarta oo iyagu ka soo horjeeda dhaqanka noocan ah guud ahaan.